Vivo iQOO Space Knight Edition, mbipụta ọhụrụ amachi cha cha | Gam akporosis
Vivo weputara obere mbipute Space Knight iQOO, akara ama ama nke izizi
Ndị enyemaka BBK, Vivo, ekwupụtala ọzọ omenala version gị gaminggba Cha Cha ekwentị, na iQOO. Ọhụrụ a obere mbipụta nke mobile, nke a na-akpọ Ogwe ohere, sitere na Nchịkwa Ọchịchị Mba nke China.
Dị ka mbipụta Monster Black Knight nke e kpughere na mbido ọnwa a, ihe nlere a biara na 12 GB nke Ram na nchekwa 256 GB.
El Vivo iQOO Space Knight Limited Edition A na-etinye ya na igbe pụrụ iche buru ibu na obere igbe onyinye nwere ihe edere edere, nke ahaziri ya na mpempe ígwè eji rụọ ụgbọ mmiri Shenzhou n'ime.
Agbanyeghị na imewe ahụghị ọtụtụ mmezi, n'azụ panel nwere dị iche iche matt imecha. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ika aha, azụ echiche pụrụ ọbụna mgbagwoju anya na Pocophone F1 ruru imecha nke yiri Kevlar imecha nke F1. Ndị ọzọ karịa ndị a na ụfọdụ isiokwu Space Knight gburugburu na ngwaọrụ ahụ, mbipụta a kpaara ókè iQOO Space Knight adịghị ka iQOO oge niile.
Dị ka ihe ncheta, na IQOO bụ ụlọ ọrụ mbụ gaminggba Cha Cha ekwentị ọ kwadebere na ihuenyo Super AMOLED nke 6.41 nke anụ ọhịa ahụ nwere mkpebi FullHD + na nha ihu-nha ahụ bụ 91.7%. Ekwentị kwadoro site na Snapdragon 855 site na Qualcomm, ebe Adreno 640 GPU na-agbanye eserese. Ekwentị na-agba ọsọ na Funtouch OS dabere na A gam akporo 9.0 achịcha.
Ọ na-agụnye ihe ntanetị ihe ngosi na-egosipụta ma nweta ike ya site na a Batrị mAh 4,000 nwere nkwado maka ọsọ ọsọ 44-watt. Maka foto, ekwentị nwere ese foto azụ atọ nke nwere 12 MP n'obosara telephoto sensọ, lens dị obosara nke 13 MP, yana ihe mmetụta 2 MP maka ọnọdụ eserese. Maka selfies, enwere igwefoto 12 MP nwere oghere f / 2.0.
Ọnụahịa na nnweta nkọwa maka ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ka amabeghị. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na mbipụta ọkọlọtọ ya na 12 GB nke RAM na 256 GB nke nchekwa dị ọnụ ahịa 4,298 yuan (~ 558 euro), anyị nwere olileanya na mbipụta a ga-enwe ọnụahịa dị elu. N'aka nke ya, ọ nwere ike ọ gaghị ere na mpụga China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vivo weputara obere mbipute Space Knight iQOO, akara ama ama nke izizi
Beta nke atọ nke gam akporo Q maka OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro dị ugbu a
Redmi Rịba ama 7S: Aha ọhụrụ maka mmata ochie